Home News Gudoomiye Yariisoow oo Bilaabay in uu u Hanjabo Shaqsiyaadka Dhaliilo Maamulka Gobolka...
Gudoomiye Yariisoow oo Bilaabay in uu u Hanjabo Shaqsiyaadka Dhaliilo Maamulka Gobolka Gobolka Banaadir iyo Cali yare oo Afka Furtay!!
waxaa fashil cad oo aan qorsooneeyn cagta saaray maamulka Gobolka Banaadir ka dib markii uu maareeyn waayay Gudoomiyahu Howlaha Muhiimka ah ee Looga baahan yahay Maamulka Gobolka ku Mgacaaban,waxaana intaasi dheer in aan dan iyo heelo laga laheeyn Bulshadda Dhibaateeysan ee Hantidooda la guranaayo.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisoow) waxaa uu bilaabay in uu u goodiyo shaqsiyaadka dhaliilo Habacsanaan Maamulka Gobolka Banaadir.
Shalay Duhurkii ayaa Cali Yare Cabdi wardheere oo ka mid ah Shaqsiyaadka Nabad iyo Nolol ka Daba-Nacamleeyo waxaa uu Bartiisa facebook-ga soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegaayay in uu booqdo goobo dhowr islamarkaana uu kusoo arkay waxyaabo aan caadeeyn aheeyn oo uu maamulka Gobolka Banaadir taagan yahay Fashil cad.
Cali yare ayaa waxaa uu xusay in hadii aan wax laga qaban oo ay madaxda dalku ka aamusaan qatarta ka jirta Gobolka Banaadir ay dhalineeyso Masiibo aad u daran.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisoow) oo ka jawaabayay hadalkaasi cali yare iyo dadka kale ee dhaliilsan siyaasadiisa ayaa waxaa uu sheegay in Hay’adaha garsoorka uu u gudbiyay shaqsiyaad been abuur ka sameeynaayo Maamulkiisa.
Cali yare ayaa ka jawaabay hadalkaan Gudoomiye Yariisoow waxuuna sheegay in tani ay sii xoojineeyso Hanjabaada uu wariyayaasha u diraayo ,tasna ay sabab u tahay socdaalkiisii Kormeerka ahaa
Arinkaan ayaa waxaa loo fasiran karaa caga-jugleeyn iyo in Dadka kasoo horjeedo Maamulka Gobolka Banaadir lagu cabsi galinaayo,waana wax lala yaabay in gudoomiyahu gobolka oo loo baahnaa in uu qaato talooyinka uu dagaal u bedelo.